भागबन्डा मिलाउन तीनवटा मन्त्रालय फुटाइँदै, नेपालमा पहिलो रेलमन्त्री को बन्ला ? Canada Nepal
भागबन्डा मिलाउन तीनवटा मन्त्रालय फुटाइँदै, नेपालमा पहिलो रेलमन्त्री को बन्ला ?
आश्विन १२ २०७७
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टीमा देखिएको किचलो मिलाउन मौजुदा तीन मन्त्रालय फुटाउन राजी भएका छन् । नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दबाबमा उनी मन्त्रालय विभाजन गरेर नयाँ मन्त्रालय स्थापना गर्न सहमत भएका हुन् ।
तीन मन्त्रालय टुक्रयाएर २४ मन्त्रालय बनाउने गरी दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डबीच सहमति जुटेको स्रोतले जनाएको छ। संविधानमा २५ भन्दा बढी सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन नपाउने व्यवस्थाले राज्यमन्त्री नराख्ने गरी मन्त्रालय टुक्रयाएर आन्तरिक भागबन्डा मिलाउने प्रयास गरिएको हो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय टुक्रयाएर उद्योग र वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ टुक्रयाएर ऊर्जा र सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात टुक्रयाएर भौतिक पूर्वाधार र यातायात तथा रेल मन्त्रालय बनाउने गरी सहमति भएको बताइन्छ ।
अहिले २१ वटा मन्त्रालय छन्, अब २४ हुनेछन् । अब राज्यमन्त्री नराख्ने स्रोतले बतायो । अहिले पूर्वएमालेबाट तीनजना राज्यमन्त्री छन् ।
नयाँ रेल मन्त्रालय गठन हुने भएकाले अब पहिलो रेलमन्त्री को बन्ला भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ । भारतलगायत धेरै देशमा रेल मन्त्रालय छन् । तर, नेपालमा भने रेल चलेकै छन्, मन्त्रालय भने गठन गरिन लागेको छ ।
आश्विन १२, २०७७ सोमवार १५:२७:५३ बजे : प्रकाशित